Setimadi Dainikस्थानिय Archives - Page2of 10 - Setimadi Dainik
Archive for category: स्थानिय
होटल साःसा आज सञ्चालनमा आउने
दमौली २७ कार्तिक । तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा आज देखि होटल साःसा सञ्चालनमा आउने भएको छ । होटल व्यवसायी जीवन शाहीले सो होटल सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन् । होटलमा सुविधा सम्पन्न ९ वटा कोठाहरु रहेका छन् भने मिटिङ हल समेत रहेको छ । त्यस्तै होटलमा अन्य सुविधाहरु समेत रहेको होटल सञ्चालक […]
महोत्सव नजिकिदै जाँदा तयारी तीब्र
दमौली २७ कार्तिक । तेस्रो आदिवासी जनजाती तनहुँ साँस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सवको मिति नजिकिदै जाँदा तयारी तीब्र रुपमा अगाडि बढि रहेको छ । यसक्रममा महोत्सव स्थलमा रमाईलो मेला र स्टलहरु निर्माण गर्नेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै महोत्सव स्थलको प्रवेशद्धार सफा सडकमा गेट निर्माण गर्ने कार्य भईरहेको छ । […]
यो बर्षको तिहारमा जुवातास नभएकै हो कि तनहुँ प्रहरीले आँखा चिम्लियो ?
सेतीमादी संवाददाता दमौली २६ कार्तिक तिहारमा जुवातास कुनै नौलो विषय होइन । सामान्य मनोरञ्जन देखि जीतहारका लागि तिहारमा जुवातासको खेल हुने गर्दछ । तनहुँको सदरमुकाम दमौली र जिल्लाका प्रमुख बजारहरुमा दशै सुरु भएदेखि एकादशी सम्म राम्रै हिसाबले जुवातासको खेल हुने गर्दछ । त्यतिमात्र होइन कतिपय जुवा अखडाहरुमा त बाह्रैमासा जुवातास […]
महोत्सव सफल बनाउने प्रतिवद्धता
दमौली १९ कार्तिक ।तेस्रो आदिवासी जनजाति तनहुँ साँस्कृति एवं पर्यटन महोत्सव २०७५ सफल बनाउने प्रतिवद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । महोत्सवका विषयमा केही विवाद देखिए पनि त्यो विवादलाई अन्त्य गर्दे महोत्सव सफल बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको हो ।जिल्ला समन्वय , व्यास नगरपालिका , प्रशासन , उद्योगी वाणिज्य संघ र आदिवासी जनजातिका […]
व्यास १० र ११ मा काग्रेसको शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम आयोजना
दमौली २८ असोज । विजयी दशमी,दिपावली ,छठ र नेपाल सम्वतको अवसर पारेर व्यास १० मा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा आयोजना गरियो । सो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै काग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी संगठन मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । काग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन थालेको वरिष्ठ नेता […]
पराशर दपर्णको विमोचन
दमौली २५ असोज । विजयदशमी ,दिपावली ,छठ लगायतको चाडपर्वको अवसर पारेर पराशर कलेजद्धारा प्रकाशित पराशर दपर्ण स्मारिकाको बुधबार विमोचन गरिएको छ । स्मारिकाको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका डिन कृष्णप्रसाद गौतमले विमोचन गरेका थिए । पराशर कलेजका अध्यक्ष सूर्यचन्द्र हड्खलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति […]
वडा कार्यालयको विषयलाई लिएर डेलिगेसन
दमौली १८ असोज । वडा नं १ को वडा कार्यालयको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा )को टोली बुधबार नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने समक्ष डेलिगेसन गएको छ । नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेताहरु शंकर नारायण श्रेष्ठ ,अतिन्द्रकेशरी न्यौपाने , श्रीराम कार्की, मनुमाया श्रेष्ठ ,निर्मल पण्डित तथा वडा स्तरीय नेताहरु गंगा पोखरेल र सूर्यबहादुर […]
दमौलीमा मदनकृष्ण संग केही सम्वाद केही संगीत कार्यक्रम हुने
दमौली १० असोज एसिसिएसिको आयोजना र लियो क्लव अफ तनहुँको सहआयोजनामा तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ संग केही सम्वाद केही संगीत आयोजना गरिने भएको छ । सो कुराको जानकारी आयोजकहरुले सोमबार दमौलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए अनुसार कार्यक्रम आगामी २० गते […]
बन्दिपुरमा तनहुँ पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव हुने
दमौली १२ भदौ तनहुँको बन्दिपुरमा तनहुँ पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव २०७५ आयोजना गरिने भएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिका , बन्दीपुर युनेस्को क्लव ,रोटरयाक्ट क्लव अफ दमौली र डयाम्पस क्लवको सयुक्त आयोजनामा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । महोत्सव भदौ २२ र २३ गते आयोजना गरिदैछ । बन्दिपुरको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि […]
व्यास नगरपालिकाले माग्यो १४ जना सामाजिक परिचालक
दमौली ८ भदौं ।व्यास नगरपालिकाले १४ जना सामाजिक परिचालक माग गरेको छ । जसमध्ये ७ जना पुरुष र ७ जना महिला रहेका छन् ।नगरपालिकाले एशोसियसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल शाखा कार्यालय बन्दिपुर तनहुँ व्यास नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन हुने कृषि वन परियोजना लागि सम्बन्धित संस्थाबाट नै सेवा सुविधा पाउने हिसाबले सामाजिक […]
क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर उप—प्रमुख रसाइलीद्धारा पत्राचार
भानुभक्त प्राणी उद्यानले गति लिदै , तारबार र भवनको काम अगाडि बढ्दै
भानुबासीमा नरभंक्षी चितुवाको त्रास
सडक नाला थुनिदाँ राजमार्गको अवस्था कन्तबिजोग
चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी बालिकाको परिवारलाई राहत प्रदान
कोइराला जो आफू हारेर देश र जनतालाई जिताए
३० हजार नहुँदा कृत्रिम खुट्टा हाल्ने मगरको धोको अधुरै
लौडारी सहमहामन्त्री उठ्ने तयारीमा
मनकी धनी सुनिता
राप्रपा तनहुँको एकता अधिवेशन पछि खुसीयाली मनाउँदै राप्रपा तनहुँका नेता तथा कार्यकर्ता ।एकता अधिवेशनबाट अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पौडेल चयन भएका छन् । तस्बिरःसेतीमादी ।
के—के गतिविधि भईरहेका छन् मध्यनेपाल नगरपालिकामा ?
७५ फिट भित्रका संरचना हटाउने नगरपालिकाको निर्णय
खानीको सिमाङकनमा आलटाल
पूर्वमन्त्री भण्डारीले गरे म्यूजिक भिडियो सुटिङको उद्घाटन
वाम अधिनायकवादले गर्दा देश संकटमा – नेता गुरुङ
Magh 29 PDF
SETIMADI (248) Mansir 25.pdf
SETIMADI (247) Mansir 24.pdf
SETIMADI (246) Mansir 23.pdf